Cutter-ka dhinta Laser-ka dhijitaalka ah ee summada
3M VHB cajalad
Faahfaahinta bogagga hore.
Faahfaahinta bogagga labaad.
Faahfaahinta bogagga saddexaad.
KU SOO DHAWOW GOLDENLASER
Goldenlaser wuxuu diirada saarayaa bixinta xalka caqliga, dhijitaalka, iyo xalalka otomaatiga ee otomaatiga ah.
Soo saaraha nidaamyada laser-ka ee goynta, xardho iyo calaamadeynta. Khabiirka ku takhasusay Mashiinka goynta laser CO2 , Galvo laser iyo leysarka dhijitaalka ah .
Laga soo bilaabo la-tashiga ugu horreeya ee tijaabooyinka codsiyada qalabkaaga loogu talagalay warshadaha gaarka ah illaa tababarka loogu talagalay dadka isticmaala iyo adeegga adduunka oo dhan - Goldenlaser waxay bixisaa xalal laser oo dhammaystiran, ma aha oo kaliya hal mashiin!
MAKIINADDA LA TALIYEY
CO2 LASER cut
ARAGTI MUUJINTA LAYSKA
QARAXA LIISKA LAASTA
Taxanahan Mashiinka goynta laser-ka flatbed-ka ah ee loo yaqaan 'CO2 flatized' waxaa loogu talagalay duub ballaaran oo dhar jilicsan iyo qalab jilicsan si otomaatig ah oo isdaba joog ah u goynaya Lagu wado gawaarida iyo sagxadda mashiinka adeegga, mashiinka laser-ka wuxuu bixiyaa xawaaraha ugu sarreeya iyo dardargelinta.
Qaab No.: JMCJG-350400LD
Sifee Mashiinka Goynta Laser-ka Dharka
Qalabka saxda ah ee saxda ah iyo salka lagu wado. Xawaaraha goynta illaa 1200mm / s. CO2 RF laser 150W ilaa 800W. Nidaamka wareejinta faakiyuumka. Auto-feeder leh saxitaanka xiisadda. Ku habboon jarista dharka miiraha, darbiyada miiraha, caagagga, PP, muraayadaha maaddada, PTFE iyo dharka warshadaha.
Isku dar ah qaab weyn X, Y dhidibka laser goynta (gooynta) iyo xawaaraha sare Galvo laser perforating (laser cut godad). Waxaa loogu talagalay jarista mareenka hawo-qaadashada dharka (sock duct, sox duct, duct sox, sock marinka, marinka hawada dharka, sock hawada, hawada sox)
Qaab No.: JYCCJG-1601000LD
Sariir Goynta Dheeraad ah - Gaarka ah 6 Mitir, 10 Mitir ilaa 13 Mitir oo sariiro ah oo loogu talagalay qalab dheeri ah oo dheeri ah, sida teendhada, dharka dhogorta, baarashuudka, paraglider, daar, marquee, shiraac, parasail, sunshade, rooga duulimaadka viation
Qaab No.: JMCZJJG (3D) 170200LD
Galvo & Gantry Laser xardho Mashiinka Mashiinka loogu talagalay Dharka, Leather
Nidaamkan leysarka wuxuu isku daraa galvanometer iyo XY gantry. Galvo waxay bixisaa xardho xawaare sare, xoqid, daloolin iyo goynta walxaha khafiifka ah. XY Gantry wuxuu oggol yahay ka shaqeynta qaab-dhismeed ballaaran iyo keyd dhumuc weyn
Qaab No.: ZJJF (3D) -160LD
Is dabajooga si aad u duujiso Mashiinka Mashiinka Laser Xardho
3D nidaamka Galvo firfircoon, dhameystirka xardho xardho joogto ah hal talaabo. Tikniyoolajiyadda leysarka “duulaya”. Ku habboon dharka qaabka weyn, dharka, maqaar, denim, EVA xardho.
Qaab No.: ZJ (3D) -9045TB
Xawaare Sare Galvo Laser xardho Mashiinka Kabaha Leather
CO2 RF laser biraha 150W 300W 600W. 3D nidaamka xakamaynta galvanometer firfircoon. Otomaatig ah dhidibka Z iyo hoose. Miis malab-shixnad bir ah oo zinc-bir ah oo shaqeynaya.
Qaab No.: ZJ (3D) -15050LD
Mashiinka Jarida Galvo Laser ee loo yaqaan 'Laser Laser Laser' oo loogu talagalay Saxannada cajaladaha xoqan
Nidaamyada iskaanka weyn ee aagga galvanometer. Ilo badan oo laser si kor loogu qaado wax soo saarka. Quudinta otomaatiga ah iyo dib u laabashada - gudbiyaha…
Qaab No.: CJGV-160130LD
Sublimation Fabric Laser magaabay wiil for dharka isboortiga
Vision laser waa fiican ee goynta dhar daabacaadda digital sublimation dhar ah oo dhan qaabab iyo cabbirro. Kaamirooyinka ayaa baaraya dharka, ogaanaya oo aqoonsanaya dusha sare ee daabacan, ama soo qaadaysa calaamadaha diiwaangelinta daabacan waxayna ku jareysaa naqshadaha la doortay xawaare iyo saxnaan.
Qaab No.: QZDXBJGHY-160100LDII
Madaxa Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Madaxa-bannaan
Nidaamka goynta laser-ka madax-bannaan ee madax-bannaanida ah ee madax-bannaan ayaa si buuxda isugu dhafan nidaamka aragtida caqliga leh, waxaana lagu sii hagaajiyaa shuruudaha farsamaynta daabacaadda daabacan.
Qaab No.: MZDJG-160100LD
Diiwaangelinta saxda ah ee saxda ah ayaa calaamadeynaysa meeleyn iyo magdhow cillad caqli-gal ah oo si sax ah loo goynayo leysarka sublimation dheeha logos daabacan, xarfaha iyo lambarrada.
Qaab No.: CJGV-320400LD
Foomka Wide Laser Cutter ee Calanka waaweyn, Calaamadaha, Calaamadaha jilicsan
Mashiinka weyn ee laser-gooyaha ayaa si gaar ah loogu talagalay warshadaha daabacaadda dhijitaalka ah - soo saarista awoodo aan la qiyaasi karin oo loogu talagalay dhammaystirka qaab ballaadhan oo dijitaal ah oo daabacan ama sawir-gacmeedyo dhar-sublimated, boodhadh iyo calaamado jilicsan.
Qaab No.: LC350
Ku duub Mishiinka Goynta Laser-ka ee Filim iyo Cajalad
Xawaaraha sare ee nidaamka madaxa dhimista laser Naqshad hal-abuur leh oo dhinacyo badan leh. Adeegsiga CO2, IR ama gudbinta dogobka UV si ay u bixiyaan awoodo kala duwan iyo mowjadaha mawjadaha. Ku habboon duubista si ay u duubto jarjaridda filimada wax-qabadka sarreeya, cajaladaha iyo dhejiska.
Qaab No.: LC-350
Is dabajooga si loo duubo Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dhimashada
Goynta leyslaad la'aanta iyo xalka loogu talagalay dhameystirka calaamadda. Akhristaha lambarka 'QR' wuxuu taageeraa isbeddelka tooska ah ee duulimaadka. Hagaha Websaydhku wuxuu ka dhigayaa kala-furashada iyo dib-u-habeynta mid sax ah.
Qaab No.: LC-230
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Gooyo
LC230 waa mashiin dhameystir laser ah is haysta, dhaqaale iyo si buuxda digital leh ugu ballaaran 230mm ballaaran webka. Waa xulasho aad u fiican orodka gaaban ee dijitaalka ah. Bixinta isbeddelka eber muddo ka dib oo aan lahayn qiimaha saxanka dhimanaya.
Waxaan ku takhasusnay goynta leysarka iyo xallinta xallinta barnaamijyo fara badan. Waa kuwan qaar ka mid ah codsiyada aan inta badan la shaqeyno.
Xulo warshadahaaga: xalka ugu fiican ee kugu habboon adiga.
HOYGA & Kabaha
Iyada oo hal-abuurnimo tikniyoolajiyad adag leh, Golden Laser ayaa awood u leh inay bixiso mashiinno leysarka loo habeeyay iyo xalal, ka dhig wax soo saarkaaga mid wax ku ool ah oo faa'iido badan leh.
Sida casriyeynta-teknoolajiyada sameynta, laser-ka ayaa la soo koraya faa iidooyin aan la qiyaasi karin, iyadoo la beddelayo habab dhaqameedyo aad iyo aad u badan.
Nidaamyada Nidaamka Laser Nidaamka Nidaamka Darawalka
Ku Saabsan Laser Dahabka ah (faylka PDF)
Had iyo jeer bixi taageero adeeg. Injineerada loo heli karo mashiinada adeegga dibada si loogu rakibo adeegga rakibaadda, adeegga tababarka iyo adeegga dayactirka.
Halkan ka daawo warbixin ku saabsan warshadaha ku habboon iyo wararkeenna iyo dhacdooyinkeenna ugu dambeeyay.
LC350 Laser Die-Cutter ayaa ka soo muuqday SINO LABEL 2022 Marlabaad
Goldenlaser wuxuu si rasmi ah uga dooday nidaamka cusub ee caqliga leh ee xawaaraha sare leh ee nidaamka goynta laser, kaas oo soo jiitay macaamiil badan inay joojiyaan oo ay wax ka bartaan maalinta ugu horeysa ee SINO LABEL 2022…
Goldenlaser wuxuu si daacad ah kuugu martiqaadayaa SINO LABEL 2022
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku ogeysiino in laga bilaabo 4 ilaa 6 Maarso 2022 aan joogi doono SINO LABEL carwada Guangzhou, Shiinaha. Goldenlaser wuxuu keenaa nidaamka cusub ee la cusboonaysiiyay ee LC350 garaadka xawaaraha sare ee habka dhimista laser.
Goynta Kaarboon Fiber Laser: Faa'iidooyinka iyo Codsiyada
Goynta Laser fiber carbon waxaa lagu samayn karaa CO2 laser, kaas oo isticmaala tamarta ugu yar laakiin bixiya natiijooyin tayo sare leh. Tiknoolajiyada wax-soo-saarka laser-ka-goynta fiber-ka carbon waxay sidoo kale ka caawisaa dhimista heerarka qashinka marka la barbar dhigo farsamooyinka kale ee wax soo saarka…
Waxsoosaarka Saxa • Raacitaan Aad U Wanaagsan
Awood u lahaanshaha
Xalka Laser Bixiyaha Bixinaya
Shabakada Caalamiga ah ee Iibka
By 20 sano 'waayo -aragnimo ee warshadaha laser, si joogto ah horumarinta iyo isticmaalka teknoolajiyada sare, Goldenlaser ayaa noqday soo saaraha ugu horreeya ee mashiinada laser la kartida habayn casri ah.
> Baadh mashiinnada leysarka
Goldenlaser wuxuu ku siinayaa xalal laser xirfadeed warshadahaaga gaarka ah - si uu kaaga caawiyo kordhinta wax -soo -saarka, fududeynta habka wax -u -qabadka iyo macaash badan.
> Baadh xalalka laysarka
Suuqa dibedda, Goldenlaser wuxuu aasaasay shabakad suuqgeyn qaangaar ah in ka badan 100 waddan iyo gobollada adduunka oo dhan, oo leh badeecadahayaga tartamaya iyo nidaamka hal-abuurka suuqa ku jihaysan.
> Baro wax badan oo ku saabsan Goldenlaser
Xuquuqda daabacaadda © 2005-2022 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin.